तीन लघुकथा शृङ्खला - ३२ | साहित्यपोस्ट
प्रकाशित २८ बैशाख २०७८ १९:४५
(मातातीर्थ औँसीको सन्दर्भमा आमा विशेष लघुकथाहरू)
(अक्षयकोष सहितको लघुकथा सम्मान राख्ने लघुकथाकार)
“आमा, मेरा लागि संसारमा तपाईँ जत्तिको ठूलो कोही छैन ।”
कहिलेकाहीँ भावुकतावश उसका स्वरमा पीडा मिसिन्थ्यो । बाल्यकालदेखि आमाको माया पाएर आजसम्म आइपुगेको थियो ऊ । आमा उसका लागि सबथोक थिइन् । किशोरावस्था पार भयो । जवान भयो, जागिरे भयो अनि कुनै महिलाको पति पनि भयो ।
आमाको दिनचर्या यथावत् । पहिले छोराको हेरचाह हुन्थ्यो । अब बुहारी पनि थपिएपछि कामको बोझमा अझ वृद्धि भयो आमाका लागि ।
“घरका साना साना काम गर्नका लागि पढेकी हैन मैले। बुझेको हो ?”
पतिलाई पत्नीको घुर्की आइरहन्थ्यो । कामदार राख्ने कुरा गर्दा आमा भन्नुहुन्थ्यो – “म छँदै छु नि, बाबु । किन कामदार राख्ने ? घरको काम त हो नि ! बढी काम नै के छ र ?”
आमाको सान्त्वनाले आश्वस्त हुन्थ्यो ऊ ।
जागिरे जीवन, व्यस्तता वृद्धिसँगै अब आमासँग भेटमा कमी हुन थाल्यो । साँझ बिहान मात्र आमासँग भेट हुने गर्दथ्यो । आमा पहिले जसरी नै काममा खटेकी देखिन्थिन् । उसलाई लाग्थ्यो, आमाले सारा घर सम्हालेकी छिन् ।
समय–समयमा खोकिरहन्थिन् उनी । “कतिको खोक्न पर्या होला यो बुढीलाई !” कहिलेकाहीँ श्रीमतीको च्याँट्ठिएको बोली उसका कानले पनि श्रवण गर्ने गर्दथे । सम्पन्न परिवारकी, पढेलेखेकी श्रीमतीसँग बोल्ने आँट कहिल्यै भएन उसमा । आमालाई स्वास्थ्यको बारेमा सोध्दा केही नभएको जवाफ पाउँथ्यो । व्यस्तताले गर्दा आमाका लागि समय निकाल्न उसलाई फुर्सद नै हुँदैनथ्यो । श्रीमतीलाई “आमालाई जँचाएर ल्याऊ ?” भन्दा वास्ता हुँदैनथ्यो ।
अन्त्यमा आमाको क्यान्सर लागेर मृत्यु भयो । आमा नहुनुको पीडाबोध गर्दै उसले रुँदै भन्यो, “आमा…….” ।
अनि चारैतिर हेर्यो तर अन्धकार सिवाय केही थिएन ।
(लघुकथामा अक्षयकोषको स्थापना गरी लघुकथाकारहरूको सम्मान कार्यको थालनी गर्ने पहिलो लघुकथाकार डाक्टर पुष्करराज भट्ट हुन् । उनीले २०७१ सालमा १ लाख रूपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी लघुकथा समाजबाट “पद्म रामचन्द्र लघुकथा सम्मान” वितरण गर्थे । यो सम्मा सुरुमा प्रा. मोहनराज शर्मालाई अर्पण गरिएको थियो भने २०७७ सालसम्म लघुकथा समाजबाट वितरण गरियो ।
डा. पुष्करराज भट्ट नेपाली लघुकथामा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि बन्नु भएको छ । उहाँ लघुकथाको अध्ययन, लेखन, विकास र विस्तारमा लागिपर्नुभएको छ । स्थापना कालदेखि नै लघुकथा समाजमा आबध्द भट्ट हाल समाजबाट अलग भएर लघुकथामा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
प्रस्तुत “आमा” लघुकथामा डाक्टर पुष्करराज भट्टले विवश छोरा र कर्कस बुहारीको कथा चुन्नु भएको छ । विवश हुँदाहुँदै अन्त्यमा कारुणिक कथा बनेको छ ।)
पुरानो समय ।
याने मेरो बालापनको ।
घरमा एउटा चुलेसी थियो । म त्यो चुलेसीलाई खुबै मन पराउँथे । सुलुत्त परेको पातलो जिउ । धारिलो मेरुडण्ड । सरमले निउरिएको टाउको । नाकमा सानो नत्थी ।
म सम्झन्छु –
त्यो चुलेसीले कहिले भान्छा वरिपरि बसेर काम गरिरहेको हुन्थ्यो । कहिले मझेरीमा बसेर तरकारी काटिरहेको हुन्थ्यो । पिँढी, आँगन वा कहिले चोटा र कोठा पनि पुगिरहेको हुन्थ्यो । जहाँ पुगे पनि चुलेसी केही न केही सुधारी रहेको हुन्थ्यो ।
बेला बेला हजुरआमा – “चुलेसी भद्दा भएको” भनेर फतफलाइरहनु हुन्थ्यो । हजुरआमा फतफताएपछि मेरो बाबाले चुपचाप चुलेसीलाई ढुङ्गाको सहयोगमा साँध लगाउनु हुन्थ्यो, स्वाँई ! स्वाँई !!
साँध लगाउँदा चुलेसी र ढुङ्गाबीच घर्षण चल्थ्यो र कुनै बेला झिलिक्क झिल्का पनि निस्कन्थ्यो ।
साँध लगाएपछि चुलेसी पुन: भान्छा, मझेरी, पिँढी, आँगन वा चोटा, कोठामा पुगिहाल्थ्यो ।
ठूलो जहान भएर होला-
चुलेसीलाई खासमा फुर्सदै थिएन ।
म चुलेसीले प्राय:
तरकारी हैन, सपनाहरू काटिरहेको देख्थेँ ।
फलफूल हैन, रहरहरू तासिरहेको भेट्थेँ ।
आज पैंतालीस वर्षपछि म त्यो नत्थी लगाएको चुलेसी सम्झिरहेको छु । मलाई चुलेसी र मेरी आमा उस्तै उस्तै लाग्छ । तर दु:खको कुरो –
न मसँग त्यो चुलेसी छ न मेरी आमा ।
(नेपाली लघुकथामा ५० को दशकलाई सक्रियकालीन समय मानिन्छ । यही समयमा आख्यानकार दीपक लोहनी लघुकथामा प्रवेश गरेका हुन् । बीचमा गुपचुप भएका उनी ७० को दशकदेखि लघुकथामा आक्रामक शैलीमा देखिएका छन् । उनी “सेलेक्टेड” लघुकथाहरू मात्र लेख्छन् ।
दीपकले लघुकथाको विषय उठान, पटकथाको बुनोट, लघुकथाको अन्त्यमा झट्का र कथाले बताउँदै गएको विषयमा ३६० डिग्रीको परिवर्तन ल्याउनसक्ने क्षमता राख्छन् । उनी लघुकथाको शीर्षक चयनमा पनि आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गर्छन् । दीपकका लघुकथाहरू सूत्रात्मक छन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “चुलेसी” पूर्णरुपेण आमासँग सम्बन्धित छ । आमाको दु:ख, रहर, सपनाहरूलाई आमाले नै प्रयोग गर्ने चुलेसीसँग तुलना गरी कथामा “नोष्टाल्जिया” भित्राएका छन् ।)
रातको उत्तरार्ध थियो कि बिहानीको पूर्वार्ध कुन्नी, आकाश अँध्यारोछँदै एकपटक फेरि सुत्केरी भइन् आमा !
अचम्म, खसम बितेको कैयौँ वर्ष भैसक्दा पनि फेरि सुत्केरी भइन् ! उद्देश्य उनैलाई थाहा होला, परिणाम पनि थाहा होला उनलाई । किन सुत्केरी भयौ भनेर सोध्न ढिलो भैसकेको थियो ।
श्रीमान् गम्भीर नेपाली जन्माउन सुत्केरी भइन् कि भनेर उकुसमुकुस भयो मलाई, प्रचण्ड प्रतापी भूपति जन्माउन भइन् कि भनेर हीनताबोध पनि भयो । उनको सोचाइलाई मनमनै सलाम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो मलाई – “अनुहार जस्तोसुकै होस् , भाग्य जस्तोसुकै होस्, सबै सुत्केरीहरू चन्द्रमा जन्माउँछन्, सूर्य जन्माउँछन् ।”
आफ्नै आमा त हुन्, कर्तव्य थियो – यताउताको खुशी बटुलेर औपचारिक बधाई दिने हिम्मत जुटाएँ र एउटा किस्तीमा फलफुल, चकलेटको जोरजाम गरेँ ।
सुत्केरी आमाको मुखहेर्ने तयारीमा
अर्को किस्तीमा फरिया, चोलो र मिठाई सजाएँ ।
किस्ती लिएर सबेरै उनको कोठामा पस्दा उनी हिजोअस्तिकै कमजोरीमा पलेँटी कसेर बसेकी थिइन् । सायद मेरै प्रतीक्षामा । हेर्दै लाग्थ्यो, नुहाइधुवाइ गरेर चोखिइसकिछन्, दैनिक पूजाआजा, धूपबत्ती पनि सिध्याइसकिछन् ।
अप्ठ्यारो मान्दै, लजाउँदै, दुबै किस्ती उनको हातमा राखिदिएँ र जिस्काएँ – “लौ, सुत्केरी आमालाई बधाई ।”
आमाले लजाउँदै किस्तीको फरियाचोलो आफ्नो काखमा राखिन्, मेरो निधारमा रातो टीका लगाइदिइन् अनि मिठाईको एकटुक्रा खुवाइदिँदै मेरो टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन् – “लौ लौ, प्रत्येक साल आजकै दिन जन्मिरहनू, तँलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना !”
(नेपाली लघुकथामा मलाई सुमन सौरभ गजब मन पर्ने थोरै लघुकथाकार मध्येका एक हुन् । उनी विषयलाई अत्यन्तै न्याय गर्ने लघुकथाकार हुन् ।
सुमनका लघुकथा संग्रहहरू थुप्रै छन् । त्यसो त उनी लघुकथा मात्र लेख्ने स्रष्टा पनि हुन् । उनी आफ्ना लघुकथाहरूमा स्वैरकल्पना बढो शालीन पारामा घुलाउँछन् जसरी दूधमा मह घुलाइने गरिन्छ ।
प्रस्तुत लघुकथा “सुत्केरी आमा” कुमारी कथा हो । यस्तो कथा हालसम्म कुनै कथाकारले लेख्न मात्र हैन सोच्न पनि भ्याएका छैनन् । लघुकथाले स्वैरकल्पनाको बाटो हिँड्दै अन्त्यमा उत्तरआधुनिकता घुसाएको छ । पाठक यो लघुकथा पढिसकेपछि शून्यमा हराउने छ । पाठक शून्यबाट झल्याँस्स भएपछि मात्रै लघुकथाकार सुमन सौरभलाई खोज्ने छ ।)
तीन लघुकथातीन लघुकथा शृंखलादीपक लोहनी